Pfungwa Dzako Ndedzedu | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 20, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwemavhiki mashoma apfuura ndanga ndichinhonga nekuisa pasi mabhuku - rimwe rawo raive The Big switchch, na Nicholas Carr. Nhasi, ndapedza kuverenga bhuku.
Nicholas Carr akaita basa rakanakisa pakuvaka fananidziro pakati pekushanduka kwesimba remagetsi remagetsi munyika ino uye nekuzvarwa kwegore komputa. Patsamba yakafanana, Wired ine chinyorwa chikuru, chinonzi Planet Amazon, mune chayo chinyorwa chaMay 2008 chinotaura nyaya yegore reAmazon. Ive neshuwa yekutarisa kunze. Wired inoreva kupihwa kweAmazon seHardware seSevhisi (HaaS). Iyo inozivikanwa zvakare seIye Infrastructure seSevhisi (IaaS).
Ndichiri kurumbidza kunzwisisa kwaNicholas pamusoro pegore komputa uye iro ramangwana rekuti 'tichaita sei munguva pfupi iri kutevera, ndakavhunduka paakatanga kukurukura izvo zvisingadzivisike masimba makomputa angave ave pamusoro pedu apo isu tichienderera nekuzvibatanidza - kunyangwe nehupenyu. Iri bhuku rinotorera kunze kune iro basa riri kutengeswa nevashambadzi parinotora data - uye rinenge rinotarisa rinotyisa kuti izvi zvingave zviri kupi mune ramangwana.
Pese patinoverenga peji remavara kana kudzvanya pane iyi link kana kuona vhidhiyo, pese patinoisa chimwe chinhu mungoro yekutengera kana kutsvaga, nguva dzese dzatinotumira email kana kutaura pahwindo rekutumira mameseji, tiri kuzadza mu "fomu yechinyorwa." … Isu kazhinji hatizive nezve tambo dzatiri kutenderera uye sei uye naani dzavari kushandiswa. Uye kunyangwe dai taiziva kutariswa kana kudzorwa, isu hatingaite hanya. Mushure mezvose, isu tinobatsirwawo nekuitwa semunhu neInternet zvinoita-zvinoita kuti tive vatengi vakakwana nevashandi. Isu tinogamuchira kudzora kwakakura mukudzora kuti zvive nyore. Dandemutande redandemutande rakagadzirwa kuyera, uye hatisi kusafara mukati maro.
Kushandura uye masimba mazwi akasimba kwazvo andisingakwanise kubvumirana nawo. Kana ndikakwanisa kushandisa data revatengi kuyedza kufanotaura zvavanogona kuda, ini handisi kuvadzora kana kuvadzvinyirira mukutenga. Asi, mukudzoka kwekupa iyo data, ndiri kungoedza kuvapa izvo zvavanogona kunge vachitsvaga. Izvo zvinoshanda kune ese mapato anobatanidzwa.
Kudzora kwaizoratidza kuti chinongedzo chakakunda neimwe nzira yangu yekusununguka, iri chirevo chisina musoro. Isu tese tiri zombies dzisina pfungwa paInternet idzo dzisina kugona kuzvidzivirira kubva kushambadziro yemavara yakaiswa zvakanaka? Chaizvoizvo? Ndicho chikonzero shambadziro dzakanakisisa dzichiri kungowana chete imwe-nhamba kudzvanya-kuburikidza nemitengo.
Kana iri remangwana remurume nekusanganiswa kwemuchina, ini ndinototarisira nezve iwo mikana. Fungidzira uchikwanisa kuwana injini yekutsvaga pasina kukosha kwekhibhodi neInternet kubatana. Vanorwara nechirwere cheshuga vanozogona kuongorora ese mashuga eropa VO uye nekuona chikafu chakanakisa chekudya kupa chikafu. Pamusoro pekudya? Zvichida iwe unogona kuongorora yako yezuva nezuva macaloriki kutora kana kuverenga Weight Watcher mapoinzi iwe uchidya.
Icho chokwadi ndechekuti isu tine zvishoma zvishoma kuzvidzora pachedu, usambozvifunga kunetseka nezvazvo AI. Tine nyika ine nzungu dzehutano dzinoziya nenzara miviri yavo, vanorovedza nzungu dzinopedza majoini, vakapindwa muropa nenhema, vanobiridzira uye vanoba kuti vagadzirise… nezvimwe. Isu tiri michina isina kukwana isu pachedu, tichigara tichiedza kugadzirisa asi kazhinji tichiperevedza.
Iko kugona kwekusvetuka uchishandisa keyboard uye kuongorora uye 'plug in' kuInternet haisi pfungwa inotyisa kwandiri zvachose. Ndiri kukwanisa kuziva izvozvo masimba izwi rinoshandiswa zvakasununguka uye, nevanhu, haritombove rechokwadi. Hatina kubvira takwanisa kuzvidzora pachedu - uye michina yakaitwa nevanhu haife yakakwanisa kukunda muchina wakakwana uyo Mwari pachawo akaunganidza.
Iyo Big switch ndeye kuverenga kukuru uye ini ndinokurudzira chero munhu kuti atore. Ini ndinofunga mibvunzo yainomutsa pane ramangwana rekunyepedzera njere dzakanaka, asi Nicholas anotora anotyisa mukana iwoyo pane kungova netariro yekutarisa zvazvichaita mukudyidzana kwevanhu, kugadzirwa uye nemhando yehupenyu.
Tags: karendakukakavara mazanozvakasikwa zvemukatiChiitiko manejimendichiitiko chikuvagoogle kalendariiCalpirate bay
Verizon: Ndokumbirawo Mira Kupenga
Ndiri kuita nzira yangu kuburikidza nebhuku raNick zvakare .. kusvika parizvino zvanga zvichinakidza kuverenga - ndinovimba zvicharamba zvakadaro.
Nicholas anoita kunge ari mumiriri ane hukasha munyika yehunyanzvi, asi ini ndinofarira kuverenga ese ari maviri bhurogi uye ndakanyanya kufarira bhuku iri. Munguva pfupi yapfuura, ndave ndichikwezvwa zvakanyanya kumabhuku enhoroondo kupfuura mamwe - uye Nicholas akapa nzwisiso huru mukushanduka kwekugadzirwa kwesimba uye kufanana kune komputa.
Ndicho chaive chikamu changu chandaifarira chebhuku uye ndinofunga kuenderana kwake kwanga kuri pachena. Zvisinei, paakapfuura izvozvo, zvinhu zvakava nepashoma. Kwete kuti ruzivo rwanga rwusiri chinhu chatinofanira kunetsekana nacho - kungoti ndinofunga kuti rakafuratira mikana inoshamisa.
Nakidzwa nekuiverenga - handigone kumirira kuona zvaunofungawo pazviri!
Ndatenda nekunzwisisa. Ndinobvuma kuti nzira dzekutyisidzira dzinogona kutengesa mabhuku
kune vaverengi vekutanga, asi chokwadi ndechekuti makomputa ane zvombo
data.. usaite uye hauzo "dzora nyika".. Crazy !!!
Kutengesa kwemakore uye kusatya PC yangu!